Action – Mood for Movies
2002 လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ James Bond နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပေါလာတယ်။ နာမည်ကတော့ Jason Bourne တဲ့။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့ Mediterranean ပင်လယ်ထဲမှာ မျောနေတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်။ ကျောမှာလည်း သေနတ်ကျည်ပေါက်ရာ နှစ်ခုနဲ့။ ပြဿနာက သူဟာ ဘယ်ကလာပြီး ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်မသိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာတာကတော့ သူဟာ CIA Operation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Treadstone လက်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ CIA အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တစ်ယောက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ Jason
> “Nature made meafreak. Man made meaweapon. And God made it last too long.” မင်းတို့Logan လို့ သိကြတဲ့ ငါ့ကို James Howlett ဆိုတာ ငါ့နာမည်အရင်းလို့ဘယ်သူတွေက သိခဲ့ကြမှာလဲ။ ငါဟာ မင်းတို့ထင်နေကြတဲ့ စွမ်းအားရှင်သူရဲကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ ငါဟာ လူ့ဘဝရဲ့ကျန်စာသင့်နေခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ထိုကျိန်စာက ငါ့ကို အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ ငါဒီဘဝကြီးကို မလိုချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘဝအသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ချင်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ငါ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝတော့မယ်ဆိုတာ ငါအလိုအလျောက် သိနေခဲ့တယ်။ . ငါ့လက်ကြား
ရုပ်ရှင်လောကမှာ sci-fi ဇာတ်ကားလို့ပြောလိုက်ရင် Star Wars ပြီးရင် ပရိသတ်တိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကိန်းအောင်းနေခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကားက 1982 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Blade Runner ဇာတ်ကားပါပဲ။ ထိုမူရင်း Blade Runner ဇာတ်ကားဟာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးနီးပါးရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး sci-fi ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့တယ်။ sci-fi genre မှာ ယခုထိလည်း မူရင်းBlade Runner ဇာတ်ကားထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဇာတ်ကားကို မည်သူမှ မရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ ထိုဇာတ်ကား စစဖွင့်ခြင်း မိနစ်အနည်းငယ်မှာတင်ပဲ ထိုရုပ်ရှင်တင်ပြခဲ့တဲ့ အမ